My Art Blog - David Bridburg ~ Biputere Osisi Oge A
Ọgba ọkpụkpụ David Bridburg Akụkọ akụkọ m na-alaghachi na 2006 nwere echiche dị mfe ịghọ onye na-ese foto dijitalụ. Ọrụ m na-ebupụta na nkuzi onwe onye na 2012. Na 2014 My Postmodernism malitere ịmị mkpụrụ. Egosiputa ọkpụkpụ m, achọghị m ịbụ onye omenkà agụụ na-agụgbu. N'ime ikpeazụ…
Gaa n'ihu Ọgụgụ Googlelọ ahịa Google, Microsoft, Facebook na Instagram
Abstract Artists and Art: Black and White, Definition, Geometric, and Modern Dị ka onye mbido chọrọ ịmalite ebe na nkà ị chọrọ ịmalite ebe. Enwere m olileanya na ịchọta ihe odide m bụ ihe na-atọ ụtọ. KISS ma mepụta, ị nwere ike ịbụ onye na-ese ihe nkiri na-atọ ụtọ. Nnennen n'ihu disclaimer: site n'ịrapara na akụkọ m ị ga…
Gaa n'ihu Ọgụgụ Etu esi ahụ ndị omenkà na-ahụ anya maka onye mbido
Gịnị kpatara Vincent van Gogh Paintings? Vincent van Gogh ereghị ọ bụla n'ime ọrụ ebube ya. Ka nke ahụ mikpuo: maka ọtụtụ n'ime anyị, nka bụ ọgụ na mgba. Yabụ kedu ebe dị mfe maka onye mbido? The dijitalụ artform ọtụtụ folks na-enye niile ọ ofụ nke na-aka gị ruru unyi, ma na-enweghị mkpịsị aka sere…
Gaa n'ihu Ọgụgụ Otu m ga - esi jiri Vincent Van Gogh Paintings gwuo egwu
10 Wonderful Okooko Osisi sere nanị David Bridburg Begmalite ọrụ ohuru nwere ike itu egwu. Aghọtara m nke ahụ. Agbaji ihe n’ime obere iberibe. Mee ka ọ dị mfe. Tinye otu ụkwụ n'ihu nke ọzọ. Emere m nke ahụ. Ugbua afọ ole na ole gara aga, enwere m ọrụ aka ọrụ 400. Site mbido ọkachamara ndị a…
Gaa n'ihu Ọgụgụ Etu Ifuru Osisi ndi m di nfe